नेविसंघको महाधिवेशन : साढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ ! | Diyopost
नेविसंघको महाधिवेशन : साढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ !
काठमाडौं, २५ असोज । गुट उपगुटको सिकार बन्दै आएको नेपाल विद्यार्थी संघमा पार्टीका गुट र उपगुटको लडाईंले १२ औं महाधिवेशलाई अन्यौल बनाइदिएको छ । आफू अनुकूल र आफ्नो पक्षमा अभियान चलाउनका लागि नेविसंघका चलाउँदै आएका गुटहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नेता उत्पादनको नर्सरी मानिने नेविसंघमा साढेको जुधाई र माछाको मिचाइ जस्तै भएको हो ।
अहिलेका कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुंग नेविसंघकै देन हुन् । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेविसंघमा नेतृत्व विकास हुने गरी पार्टीले अवसर नदिंदा युवा नेता उत्पादन नै शुन्य जस्तो भएको छ ।
११ औं महाधिवेशनबाट उमेरमा ३५ नाघेका नेताहरु अधिकांश पदाधिकारी भए पनि केन्द्रीय सदस्यहरु पनि ३० वर्ष हाराहारीभन्दा थोरै निक्कै कम संख्यामा भएका छन् । पार्टीभित्रैको खिचातानीका कारण नेविसंघमैं पनि गुटको फेरो समातेर टिकिरहने शैली देखियो । पार्टीभित्रको गुटमा नेतारुको पनि स्वार्थ गासिंदाको असर भने नेविसंघमैं पर्न पुग्यो ।
नेविसंघका नेता सुशील भट्ट पार्टी नेतृत्वले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोज्दा नेता उत्पादनको नर्सरी नै सुक्ने अवस्था आएको बताए । पार्टीले नै विधि, विधान र पद्धति अनुसार चलाउनुपर्नेमा आफू अनुकूलका नेतालाई स्थापित गर्न मनमरी गरेको आरोप उनी लगाउँछन् । यस्तो हुँदा विद्यार्थी राजनीतिप्रति र भोलिका दिनमा नेता उत्पादन हुनुपर्ने कांग्रेसकै लागि चिन्ताको विषय भएको उनको टिप्पणी छ ।
१२ औं महाधिवेशनको अन्यौल
दुई दिन अघि मध्यरातसम्म केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेताहरु यस्तै विभाजनमा देखिए । पार्टी नेतृत्व ३२ वर्षे उमेरहद लगाउँने एकसुत्रीय एजेण्डामा देखियो भने नेता पौडेल र सिटौला पक्ष नेविसंघले ल्याएको विधानभन्दा अलग विधान डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाइरह्यो । यही आपत्ति बढ्दै जाँदा ३२ वर्षे उमेरहद लागेको निर्णय गरेको प्रक्रियाप्रति नै रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखे । यसले झन् नेविसंघको भद्रगोल पाटोमा नेताहरुले खेलेको प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।
अझै त्यतिले पनि नपुगेर तत्कालीन संस्थापन पक्षका नेताहरु नेता रामचन्द्र पौडेलको घरमा जम्मा भए । सो भेलामा अब देउवाको दादागिरी नसहने भन्दैै २५ असोजका लागि डाकिएको केन्द्रीय समितिको बैठक नै बहिष्कार गरिएको छ । सो बैठकले नेविसंघको विधाानका थप विषय टुंग्याउने तयारी थियो । बैठकमा तत्कालीन संस्थापनपक्षीय नेताहरु नजाने हो भने अन्यौल बढेको नेविसंघमा महाविधेशन झन् अन्यौलतातिर जान्छ ।
निर्णय लोकप्रिय दाउ, टिका लगाउँने
३२ वर्षे उमेरहद नेविसंघमा लाग्नुपर्ने विषय प्रगतशील नै हो तर यही लोकप्रिय अभ्यासको बलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा महाधिवेशन नगरी टिका लगाएर आफू अनुकूलको नेतृत्व ल्याउन लागेका छन् । अहिलेसम्म तल्लो तहदेखि जिल्लासम्मको अधिवेशन भएर अब अब क्याम्पस र प्रदेशको हुँदै १६ कात्तिकदेखि महाधिवेशन सुरु हुनुपर्ने हो । तर, कार्यतालिका सबै नै प्रभावित भइसकेको छ । साथै, प्रमुख चाडबाड नजिकिएसँगै क्याम्पस र विद्यालय बन्द हुनेभएपछि अब तल्लो तहका अधिवेशन छठसम्मै हुनेछैनन् । यस्तो हुँदा अब मंसिर २ को अन्तिम कार्यकालसम्म निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आउँने सम्भावना अत्यन्त कम छ । यस्तोमा देउवालाई नेविसंघमा टिके नेतृत्व ल्याउने सोचमा बल पुग्ने निश्चित छ ।